Xasan Abshir iyo Cali Geeddi oo xusul duuub ugu jira in lagu bedelo Cabdullahi Yuusuf iyo Nuur Cadde iyo madaxweynaha dowladda federaalka ah oo si weyn u doonaya in uu baarlamaanka ka ansixiyo in Puntland ay u madaxbannaanto shidaalka degaankeeda. Ruunkinet 02/03/08
Warar lagu kalsoon yahay ayaa tibaaxaya in Prof. Cali Maxamed Geedi iyo xildhibaan Xasan Abshir ay dadaal ugu jiraan in loo magacaabo xilalka madaxweynaha dowladda federaalka ah iyo ra'isul wasaaraha oo ay haatan kala hayaan Col. Cabdullahi Yuusuf iyo Col. Nuur Cadde.
Warkan oo aan ka helnay dad ku dhow dhow Cali Geeddi iyo Xasan Abshir ayaa sheegaya in mas'uuliyiintan ay u sheegeen qaar ka tirsan beesha caalamka oo ay ku jirto dowladda Itoobiya in waxa ay ugu yeereen argagixisada ka jirta Soomaaliya ay sii korodhay intii uu jagada ka tagay Cali Geeddi.
Labadan mas'uul ayaa la sheegay in ay ku andacoonayaan in ra'isul wasaare Nuur Cadde uu gacan iyo af jilicsan kula hadlay kooxaha ka soo horjeeda ayagoo sida la sheegay ay labadan nin sheegayaaan in aan haatan loo baahneyn gacan dabacsan balse loo baahan yahay in xoog lagu maquuniyo kooxaha ka soo horjeeda joogitaanka ciidamada Itoobiya iyo kuwa dowladda federaalka ah.
Qaar ka tirsan taageerayaasha xidhibaan Cali Geeddi ayaa ku sheegaya in muddo kayar 3 bilood xilka looga qaadi doono madaxweyne Yuusuf halkaasi oo ay ku dhaceyso dowladda uu madaxa u yahay ra'isul wasaare Nuur Cadde.
Dhinaca kale, madaxweynaya dowladda federaalka ah ee Soomaliya Col. Cabdullahi Yuusuf ayaa la sheegay in uu si weyn u doonaya in maamulka Puntland loo madax banneeyo shidaalka ay doonayaa in ay ka soo saaraan degaankooda.
Madaxweyne Yuusuf ayaa la sheegay in uu ku tala jiro in uu ka ansixiyo golaha baarlamaanka inta uusan dibadda uga soo bixin dalka Soomaliya.
Warar ku dhow dhow madaxweynaha ayaa sheegay in laga yaabo in uu dhawaan Cabdullahi Yuusuf u aadi doono dalka Ingriiska.